Cafe Salween(Soft Open) Review & Video
7 Aug 2017 . 2:43 PM
[Review and Video] [Unicode Below]
Coffee သောက်ရင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်!
Tea Pot လေးထဲက ငှဲ့ပြီး ဇိမ်ခံသောက်ရင်း ဖြစ်ဖြစ်!
ချစ်သူနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောမလား?
✅ဆိုင်နံမည်က “Café Salween”
✅ဆိုင်အပြင်အဆင်က ဗီဒိုလေးနှိပ်ကြည့်နော်။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အပြင်အဆင်လေးနဲ့။ စာအုပ်စင်လေးလည်း ရှိမယ်။ ကော်ဖီနဲ့ရေနွေးကြမ်းတော်တော်များများရှိမယ်။ တစ်မျိုးစီကို ဝိတ်တာကောင်လေးက အသေးစိတ် ရှင်းပြထားတယ်ဗျ။
✅ကျနော် ခုသောက် ခုစား ခုရေးတာကတော့
?မြန်မာကော်ဖီစေ့ကို မျက်စိရှေ့တွင် အမှုန့်ကြိတ်ပြီး Syphon ဆိုတဲ့ နည်း (ဗီဒီယိုလေးကြည့်နော်) နဲ့ နှပ်ထားတာဗျ။ ၅၀၀၀ ကျပ်နဲ့ စိတ်ကျေနပ်စေတယ်။ ကော်ဖီအရသာကလည်း ပျင်းတယ်မဆိုသာ ပျော့တယ် မဆိုသာ။ သင်းပြီးမွှေးနေတယ်။
?Tea ဆိုလဲ Fruit Tea ဖြစ်တဲ့ Many Berries In One Brew ဆိုတာလေးသောက်တယ်။ Blend of cranberries, Blueberries, Dragon Fruit and Goji Berries တွေ တစ်နေရာထဲ စုပြီး နှပ်ထားတဲ့ အရသာလေး။ ချိုသင်းမွှေးနဲ့ စိတ်ကို စွတ်ပျံ့စေတယ်ဗျ။ ဈေးက ၂၅၀၀ ကျပ်ကို Refill လိုက်ပေးသေးတယ်ဗျ။
?သရေစာက မြန်မာ အစားအစာလေးတွေကို ဆန်းဆန်းလေး လုပ်ထားတဲ့ Sweet Potato Cake (ကန်စွန်းဥ ဆနွင်းမကင်း) ကိုရွေးမှာလိုက်တယ်။ မြန်မာလို ဆီမများပဲ ခြောက်သွေ့သွေ့နဲ့ ထူပြီး စားကောင်းလှတယ်။ အချိုနည်းတယ်။ ကန်စွန်းဥကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ကွက်တိ။ ဈေးက ၂၀၀၀ ကျပ်။ တန်တယ်။ Slice ကြီးတယ်ဗျ။
?နေရာက 7joint တို့ 800Bowlsတို့ Savoryတို့ ဘေးမှာတင်ရှိတာ။
G 15, Asia Business Center,Mahabandula Road (between 47 and 48 st)
9:00am to 6:00pm (Soft Open ပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ)
?အိမ်သာ အရမ်းမိုက်တယ်။ ပြင်ထားဆင်ထားတာ အကြမ်းစား ခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်သာရေပိုက်အား အရမ်းပြင်းတယ်။ ? နည်းနည်းလျော့ပေးကြပါလို့ ဆိုင်ရှင်တွေ့ရင် ပြောလိုက်ပါ။
www.Akhayar.com တွင်လည်း ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်
Coffee သောကျရငျးပဲ ဖွဈဖွဈ!
Tea Pot လေးထဲက ငှဲ့ပွီး ဇိမျခံသောကျရငျး ဖွဈဖွဈ!
ခဈြသူနဲ့ မိတျဆှသေူငယျခငျြးနဲ့ စကားပွောမလား?
✅ဆိုငျနံမညျက “Café Salween”
✅ဆိုငျအပွငျအဆငျက ဗီဒိုလေးနှိပျကွညျ့နျော။ အရမျးစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ အပွငျအဆငျလေးနဲ့။ စာအုပျစငျလေးလညျး ရှိမယျ။ ကျောဖီနဲ့ရနှေေးကွမျးတျောတျောမြားမြားရှိမယျ။ တဈမြိုးစီကို ဝိတျတာကောငျလေးက အသေးစိတျ ရှငျးပွထားတယျဗြ။
✅ကနြျော ခုသောကျ ခုစား ခုရေးတာကတော့
?မွနျမာကျောဖီစကေို့ မကျြစိရှတှေ့ငျ အမှုနျ့ကွိတျပွီး Syphon ဆိုတဲ့ နညျး (ဗီဒီယိုလေးကွညျ့နျော) နဲ့ နှပျထားတာဗြ။ ၅၀၀၀ ကပျြနဲ့ စိတျကနြေပျစတေယျ။ ကျောဖီအရသာကလညျး ပငျြးတယျမဆိုသာ ပြော့တယျ မဆိုသာ။ သငျးပွီးမှေးနတေယျ။
?Tea ဆိုလဲ Fruit Tea ဖွဈတဲ့ Many Berries In One Brew ဆိုတာလေးသောကျတယျ။ Blend of cranberries, Blueberries, Dragon Fruit and Goji Berries တှေ တဈနရောထဲ စုပွီး နှပျထားတဲ့ အရသာလေး။ ခြိုသငျးမှေးနဲ့ စိတျကို စှတျပြံ့စတေယျဗြ။ ဈေးက ၂၅၀၀ ကပျြကို Refill လိုကျပေးသေးတယျဗြ။
?သရစောက မွနျမာ အစားအစာလေးတှကေို ဆနျးဆနျးလေး လုပျထားတဲ့ Sweet Potato Cake (ကနျစှနျးဥ ဆနှငျးမကငျး) ကိုရှေးမှာလိုကျတယျ။ မွနျမာလို ဆီမမြားပဲ ခွောကျသှသှေ့နေဲ့ ထူပွီး စားကောငျးလှတယျ။ အခြိုနညျးတယျ။ ကနျစှနျးဥကွိုကျတဲ့ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ကှကျတိ။ ဈေးက ၂၀၀၀ ကပျြ။ တနျတယျ။ Slice ကွီးတယျဗြ။
?နရောက 7joint တို့ 800Bowlsတို့ Savoryတို့ ဘေးမှာတငျရှိတာ။
9:00am to 6:00pm (Soft Open ပဲ ရှိသေးတယျဗြ)
?အိမျသာ အရမျးမိုကျတယျ။ ပွငျထားဆငျထားတာ အကွမျးစား ခုနောကျပိုငျး ခတျေစားလာတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိမျသာရပေိုကျအား အရမျးပွငျးတယျ။ ? နညျးနညျးလြော့ပေးကွပါလို့ ဆိုငျရှငျတှရေ့ငျ ပွောလိုကျပါ။
www.Akhayar.com တှငျလညျး ဝငျရောကျဖတျရှု့နိုငျပါသညျ